पूर्खेउली उपहार- नेपाली राजनिती ? - Enepalese.com
पूर्खेउली उपहार- नेपाली राजनिती ?
इनेप्लिज २०७१ माघ १६ गते २२:३७ मा प्रकाशित
सबैले भन्दछन- नेपालीहरूले एक चीज़ चैं पूर्खेउली उपहार पाएका हुन्छन ! त्यो हो “राजनिती” ! त्यसैले होला उपहार पाएकोले नेपालीका लागी राजनिती सस्तो, बिकाऊ, कुनै लगानी गर्नु नपर्ने र अनुभव नभए पनि योग्य मानिने एउटा भरपर्दो ब्यापार झै भएको छ! आज जुन कारणले नेपाल र नेपालीको दुर्दशा भएको छ, त्यो हो ब्यतिगत स्वार्थका लागी अपानाईएको ग़लत राजनैतिक सोच र त्यसमा लागेका अदूरदर्शि नेता ! त्यस्ता नेता छान्ने ती जनता जो दुई छाक टार्न र सिर लुकाउनका लागी गलत लाई सहि र सहि लाई ग़लत भन्न बाध्य छन! “जस्को सिंग छैन त्यस्को नाम तिखे” भने झै निजी फ़ायदाका लागी राजनैतिक बिल्ला लगाई भुईफुट्टा हुदै भाषण गरी हिंडने प्रसस्तै भेटिन्छन ! यो रोग बिदेशमा पनी सारिएको छ ! जातै पिच्छेका संगठन, नेपाली राजनैतिक दलका पुच्छर संगठन लगायत आफु हिरो बन्न खोलिएका पारिवारिक संगठन आदि ! यी सबै संगठनमा लाग्नेहरू केहि मात्र अनुभवी होलान, केहि राम्रो काम पनी गरेका होलान, बांकी सबै “पूर्खेउली उपहारवाला” नै हुन्छन ! न्यूनतम योग्यता, अनुभव र योजना विहीन जमातले कदापि नेपाल र नेपालीको हित गर्न सक्दैन न त आफु बसेको देशको नै हित गर्दछ ! यसबाट सिक्ने र सिकाउने कुरा भन्दा पनी नेपालमा आफ्नो पहुंच बढाउने र त्यही गलत राजनितीलाई बढ़ावा दिने भित्री आशय भएको पाईन्छ ! विदेशमा रहेर आफुले अध्ययन गरेका, जाने बुझेका राम्रा कुराहरू नेपालमा ब्यापक प्रचार प्रसार गरि जनचेतनामुलक कार्य गरे र प्रत्येक एन आर एन ले कमाएको केहि अंश विकासको कार्यमा लगानी गरे नेपाल र नेपालीका लागी अमूल्य उपहार हुनेछ र दुर्गन्धित राजनितीबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग पनी हुनेछ! यसबाट देशले विकासको गति लिनेछ र प्रत्येक नेपालीले दुनिंयाको सामुन्ने कहिल्यै सिर निउराउनु पर्ने छैन !
एन आर एन- युसए को चुनावको प्रसंग: तपाई यस संस्थाको लागी केहि गर्ने उद्देश्य लिई कुनै पदमा आगामी २ बर्षको लागी उम्मेदवार हुने बिचारमा हुनु हुन्छ वा उम्मेदवार भै सक्नु भएको भए मैले माथी लेखेका कुरामा एक पटक सोच्नुस, मनन गर्नुस र छातीमा हात राखेर भन्नुस एन आर एन का लागी तपाईको योग्यता, अनुभव र भावी योजना के हो ? तपाईका यी तिन कुरामा म सहमत वा प्रभावित भए पक्का पनि तपाईलाई भोट दिनेछु !